Tasko: Fotoana famoahana ny lahasa fivarotana | Martech Zone
Tasko: Fotoana famoahana ny lahasa fivarotana izao
Alahady 16 aprily 2017 Alatsinainy Aprily 17, 2017 Douglas Karr
Nandritra ny taona maro, dia tsikaritray fa ny zavatra antenaina dia matetika miakatra amin'ny mpanjifantsika raha ny vidin'ny fifampiraharahana kosa tsy. Raha ny marina, tamin'ny taon-dasa dia nandany 15% isan-taona isan-taona tamin'ny asa fanampiny ho an'ny mpanjifanay izahay. Tena tsara izany raha nanana loharanon-karena isika, saingy tsy nanana tsotra izao. Tsy maintsy nanao fiovana mahery vaika isika raha manantena ny hitazona ny fahasalamana misafidy ho salama.
Serivisy iray nanakaiky anay ny Tasko. Tasko dia nanangana rafi-pitantanana asa be pitsiny, nanome azy talenta ary nametraka firafitry ny fandinihana dingana marobe ho azy. Ny valiny dia serivisy fitantanana asa azo antoka sy marina izay nahatonga ny tahan'ny fahafaham-po ho an'ny mpanjifa 99%.
Nanapa-kevitra izahay fa hametraka ny andrana amin'ny rafitra ho an'ny iray amin'ireo mpanjifanay, an Fanaraha-maso ny peste any Indianapolis orinasa. Na dia nifantoka tamin'ny lahatsoratra lalina sy sary momba ireo karazana bibikely nandrombahana bibikely aza izahay dia nieritreritra izahay fa hahafinaritra tokoa raha afaka mandefa zava-misy isan'andro amin'ny media sosialy izy ireo. Tany Tasko, nanafatra fotoana 30 ora hikarohanay sy hikarohana antontan'isa mifandraika amin'ny bibikely amin'ny peste tena manokana izahay ary nolazainay fa ireo antontan'isa ireo dia tsy maintsy havaozina tamin'ny taona lasa.
Tsy vitan'ny nangataka ny angon-drakitra fotsiny izahay fa nangataka ihany koa ny fisian'ilay rakitra tafaverina ho format ho ampidirinaHootsuite mpandrindra marobe. Herinandro taty aoriana dia nahazo ny fisie izahay ary tonga lafatra! Tao anatiny, nanao fanitsiana kely izahay mba hanamorana ny fotoana iarenan'ny bibikely miaraka amin'ny vanim-potoana mba hampitomboana ny fandraisana sy hamaritana sary ho an'ny fanavaozam-baovao tsirairay. Ny valiny dia ny fananantsika zava-mahadomelina iray isan'andro amin'ny fandaharana mandritra ny taona sisa manerana ny Twitter, Facebook ary Google+!
Ohatra iray monja amin'ny fomba fampiasana Tasko io, saingy mino izahay fa fampiasana milay be io! Ny lahasa fanohanana ara-barotra mahazatra izay matetika no angatahina dia ny mamantatra ny tari-dalana, ny manatsara ny lisitry ny fifandraisana, mamorona atiny ho an'ny media sosialy, mamantatra ny mpanapa-kevitra, na manaparitaka atiny amin'ny Internet.
Ireto misy Tasks Marketing Tasko izay notanterahin'i Tasko:
Mitadiava fifandraisana mety ao amin'ny LinkedIn, fikarohana vaovao momba ny fifandraisana ary ampio fifandraisana vaovao ao anaty CRM.
Record 600 dia mitarika amin'ny takelaka ho an'ny toerana ara-jeografika miorina amin'ny varotra sy ny anaram-piasana.
Manampia vokatra, ao anatin'izany ny antsipiriany, ny famaritana, ny sary sns amin'ny kaontiko Shopify.
Safidio ireo sary 10 ambony nozaraina tao amin'ny Instagram tao anatin'ny 24 ora farany nasiana diezy manokana.
Mamorona index an'ny startup alemana izay nahazo Series Seed na Series A tao anatin'ny 12 volana lasa izay tsy manana rindranasa finday.
Omeo ny lisitry ny tranonkala Suède misy laharana Alexa ambany 20k, manohana ny Anglisy ary manohana ny fametrahana doka.
Mandika fanadihadiana (faharetan'ny 2:28:00)
Mamorona resadresaka amin'ny bot Facebook Messenger.
Mametraha pejy maro an-tsoratra nosoratana ho an'ny fandinihana tranga ao amin'ny Word Document. Asongadino izay rehetra tsy takatra ary apetaho amin'ny sary.
Tsotra ny vidiny - $ 5 US isan'ora ho an'ny fandefasana mahazatra ary $ 10 US isan'ora ho an'ny fandefasana mivantana.
Manafatra lahasa momba an'i Tasko
Tags: fikarohana momba ny varotraasa marketingasa marketingtasko
Manararaotra ny fahitalavitra hampiakarana marika
Angamba mandany fotoana bebe kokoa amin'ny fitantanana angona noho ny marketing ianao